2-daan Haddii Aad Fahanto Waxaad Fahantay Qiimaha Noloshaada oo Dhan! | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed — January 23, 2019
Dhammaan nolosha waxaa wanaagsan inaan dhinacyo badan ka fiirino waxyaabaha nalla haboon sidda heerarka kala duwan ee nolosheena.
Nolosha dhibaatadeedda waxay kuu bilaabataa maalinta aad dhalato illaa maalinta aad ka geeriyoonayso.
Qofka caqliga la saaxiibka ah wuxuu dareemi karaa inay wanaagsantahay in caqliga la isticmaalo. Isticmaalka caqliga iyo xooga jirkaaga ayaa kaa dhigi karo qof horumar fiican leh. Si aad guul badan ugu gaarto nolosha waxaad u baahantahay marka horre inaad ogaato sawabaha ugu weyn ee aad u nooshahay. Waxaa wanaagsan inaan nahay dad fahansan sawabaha aan u joogno dunidda. Illaahay s.w.c jini iyo insiba wuxuu u abuuray inay caabudaan sidaas awgeed waxaad ku sugantahay halis weyn haddii aadan fahansaneen ulla jeedka aad u joogto dunidda.
Haddii aad isweydiiso sawabta aad dunidda u joogto waxaad garani kartaa waxwalbo oo ku horyaallo. Garashada caqliga bini’aadamka marwalbo iskumid ma ahan. Bini’aadamka waxay wax u kala arki karaan sidda ay u kala garaad iyo caqli badanyihiin.
Waxaan rabaa inaan dhegta kuugu sheego labo shey, haddii aad fahanto labadaas shey waxaad fahantay noloshaada qiimaheeda oo dhan.
Koow, Maxaa laguu abuuray?
Fahanka danaha waa weyn Illaahay swc kuu abuuray. Inaad Ilaahay swc caabudo, laga tago beenta, zinada, xumaanta, iyo waxwalbo Illaahay swc naga reebay. Waxaan haysanaa diin nasteexo ah oo tilmaamayso horumarka nafsada bini’aamka iyo waliba ku noolaanshaha nolol raaxo leh.
Inaad nolol raaxo leh hesho waxaa kaa xiga oo kali inaad nafsadaada Illaahay wehel ugu dhigto, sawabtoo ah asaga ayay waxwalbo aktiisa yaalaan.
Qofka Alle ka cabsiga badan iyo ku xernaanshaha Alle wuu ka nolol fiicanyahay dadka aanan xittaa masaajidka qoorta soo gelinin. Waxaa wanaagsan inaad nafsadaada ku dadaasho siddii aad ku horumarini lahayd oo aad sacaado ugu noolaani lahayd. Cid kaa xigto ma jirto illaa aad adiga xaasid isku noqoto mooyee.
Labo, waa maxay hadafka noloshaada?
Waa muhiim inaad fahansantahay sawabta aad dad iyo dal ugu dhalatay? Waa inaad la timaadaa aragti qeexayso inaad heegan ugu jirto inaad u shaqeysato noloshaada. Noloshaada inaad hadaf leedahay waxay ka ciyaartaa dowr muhiim ah jiritaanka dadnimadaada. Bulsho walbo waxaa horumar gaarsiiyo waa shaqsiyaadkii ka dhashay, walina adduunyada kama dhicin deegaan ama dal horumar uu gaarsiiyay dadkale oo aanan u dhalanin deegaanka horumarka la gaarsiiyay.
Waa waa inaan marwalbo qalbiga iyo maskaxda ku haynaa in nafsadeenna masuuliyada naga saarantahay siddii aan nafsadeenna, dalkeenna iyo dadkeenna u horumarini lahayn.
Labada qodob ee aan soo sheegay waa kuwa kali horumar lagu gaari karo marka loo fiiriyo nolosha shaqsiga dunidda ku nool. Si aad nolosha ugu guulaysato waxaad u baahantahay inaad la timaado qorshayaal nololleed ee ka turjubanaayo hadafka aad leedahay, walibaana hadaf la’aan gurigaaga haka bixin. Waxwalbo oo aad qabanayso waa inay leedahay hadaf qayaxan.
-Gurigaaga haka bixin adigoo aanan aqqoonin halka aad u socoto. Waxwalbo waa inaad ku salaysaa hadaf iyo u jeedo.
Muhiimada nolosha ay kuu leedahay haddii aadan fahansaneen waa dhibaato aad u weyn, waxaana loo baahan yahay inaad noqoto qof himilo sarre xiigsanaayo.
Himilo waa waxa qofku ku fekero ama ku hamiyo innuu fuliyo ama xaqiijiyo inta uu ku noolyahay adduunkaan. Waa wax laabta qofka bini’aadamka ah kusoo noqnoqda oo qofku hadduu hanto uu noqdo qof nolosha ku guulaystay. Himmada sarre waa wax marka aad gaarto aad dareemayso guul, qanac iyo in aadan naftaada dayicin ee noloshaadu wax ku ool tahay.
Aradayda dhigato iskuulada, jaamacadaha iyo dadyowga shaqeeyo marka aad weydiiso waxa ay tahay hammigooda waxay kuu sheegayaan waxa markaas qalbigooda ku taagan, tusaalle haddii aad arday iskuul dhigta weydiiso waxa ay tahay hankiisa nololleed waxaa laga yabaa innuu ku yiraahdo waxaan rabaa inaan noqdo
“caalim cilmiga fisikiska, caalim cilmiga juqraafiga, caalim cilmiga caafimaadka iwm”
Sidda ardaygaas u yaqaano wuxuu rabo in uu gaaro ama noqdo ayaa qof walba niyadiisa ay ku jirtaa wuxuu rabo in uu noqdo ama gaaro.
Ogaaw, hadafkaaga nolosha oo aad garato waxay kuu fududaynaysaa inaad taqaan sababta aad u nooshahay, aad usoo kacdo subax walbo, u shaqeyso iyo wixii aad waqtigaaga gelinayso. Marka hadafkaaga aqoonsato una shaqeyso siddii aad u hanan lahayd waxaad lamid tahay qof diiraddu meel u saaran tahay oo go’aansaday in uu ka baxo noloshii ahayd iska dabawareeg. Sidaas awgeed, himmadaada oo aadan garanin macnaheeda waa cimrigaaga oo dhan in aad u noolaato siddii dameer dhaan raac, taas oo ku gayaysiisa in aad ku noolaato nolol aad ka qoomamayso.
Waxwalbo oo adiga hadafkaagu yahay hanashadeedu hawl bay kaa rabtaa, hawshaasna waxaa ka horreeya in maankaaga ay ku dhalaalsan tahay hadafkaaga, xooggaagana aad u jihayso siddii aad u yeelan lahayd yool iyo qorshe kuu haga.
Hadaba garashada bini’aadmigu wax garto shan marin ayay u soo maraan maskaxdiisa. Waa aragga, maqalka, urta, dhadhanka iyo dareenka jirka. Shantaas ilood waaye kuwa dhalashadeenna illaa dhimashadeenna maskaxdeenna ku waraabiya aqoonta ay u ooman tahay. Si gaar ah marka laga hadlaayo aqoon-kororsiga, saamiga weyn waxaa la siiyaa kaalinta ay dareenka aragga iyo kan maqalku ka qaataan.
Tags: Labo Shey Haddii Aad Fahanto Waxaad Fahantay Qiimaha Noloshaada oo Dhan!
Next post Cayilka Makeeni Karaa Caafimaad Darro?
Previous post Doorka Haweenka ee Nabadda Dalka